Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha ee Bulshada Washington wuxuu ku maal-gelinayaa $ 4.6 milyan laba mashruuc oo kaabayaasha kaabayaasha ah ee Degmadda Spokane - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha ee Bulshada Washington wuxuu ku maal-gelinayaa $ 4.6 milyan laba mashruuc oo kaabayaasha kaabayaasha ah ee Degmada Spokane
Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha ee Bulshada Washington wuxuu ku maal-gelinayaa $ 4.6 milyan laba mashruuc oo kaabayaasha kaabayaasha ah ee Degmada Spokane
OLYMPIA, WA - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) ayaa maanta ansixiyay wadar ahaan $ 3,828,000 oo ah amaah dulsaar yar iyo $ 828,000 oo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha, iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee bulshada ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga, shaqo abuurka iyo horumarinta ballaadhinta laba degmo oo laga hirgaliyo gobolka Spokane County bulshooyinka:
Qabiilka Kalispel ee Hindida Mashruuca Xayeysiinta Miyiga waxaa la siiyay deyn dhan $ 828,000 iyo deeq $ 828,000 ah. Mashruucani wuxuu ka kooban yahay naqshadeynta iyo dhismaha dariiqyada fiber-ka madow si loogu adeego qabiilooyinka la deggan yahay iyo meheradaha / goobaha warshadaha. Mashruucan ayaa la filayaa inuu soo saaro 419 xiriiro xawaare sare leh uuna ka dhasho sideed adeeg bixiye internet oo u adeega aagga. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 533,333 ilaha maxalliga ah.
Mashruuca Wajiga II ee Xarunta Ilaalinta Deegaanka ee Ilaalinta Deegaanka waxaa loo ansixiyay deyn dhan $ 3 milyan. Mashruucani wuxuu ka kooban yahay dhisme 14,000-laba jibbaaran oo laba jibbaaran iyo yutiilitida dhulka hoostiisa si loogu daro biyaha, bulaacada, biyaha duufaanka, isgaarsiinta, korantada, gaaska iyo nabaad-guurka. Shirkada gaarka loo leeyahay ee degmada, Intrinium, Inc., ayaa ku maalgelinaysa $ 350,000 mashruuca gaarka loo leeyahay kaas oo la filayo inuu abuuro kuna xafido shaqooyin lagu qiyaasay 201 IT iyo adeegyada isgaarsiinta shan sano gudahood. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 750,000 ilaha maxalliga ah.
“Maalgashiga maxaliga ah ee bartilmaameedka ah ee xarumaha bulshada ayaa muhiim u ah dhismaha aasaas u ah koboc dhaqaale oo guuleysta oo waara. Hadafkeenu marayo CERB waa inaan ka caawinno dawladaha hoose iyo qabiilooyinka maalgelinta aragtidooda mustaqbalka. ” ayuu yidhi Guddoomiyaha CERB Randy Hayden.
"Maalgelinta CERB waa taageero wax ku ool ah iyo dhiirrigelin dheeraad ah oo maalgashi dawladeed iyo mid gaar loo leeyahay ee kaabayaasha dhaqaalaha taas oo muhiim u ah xoojinta bulshada Washington," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Gobolka Washington Lisa Brown.
Ka baro wax badan oo ku saabsan CERB at www.commerce.wa.gov/cerb. Akhriso Warbixinta Sharci-dejinta ee CERB Miyiga Broadband 2020 iyo Warbixinta Sharci dejinta CERB 2020.
Qabiilka Kalispel: Daniel Clark, Falanqeeyaha Siyaasadda Horumarinta Dhaqaalaha, (509) 904-7862, dclark@kalispeldevelopment.com
Degmada Ilaalinta Spokane: Vicki Carter, Agaasimaha, (509) 535-7274, Vicki-Carter@sccd.org
← Isbahaysiga gobolka Washington ayaa sii daayay Qorshe 10-sano ah oo lagu baabi'inayo saboolnimada iyada oo ah naqshad loogu talagalay mustaqbal cadaalad ah, sinnaan leh Warbixinta xoogagga gobolka waxay faahfaahin ka bixineysaa siyaasadaha si loo dejiyo loona joogteeyo warshadaha daryeelka carruurta iyo in la kordhiyo awoodda qoysaska Washington →